पच्चीस हजार भन्दा बढीलाई बोल्न सिकाए – पोखरेल - Namaste Times
सोमबार, जेठ ०६, २०७६ | Thursday, March 8, 2018
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण २४, २०७४ समय: ८:४३:३८
काठमाडौं – भागीरथ कुमार पोखरेल बोल्ने कला सिकाउने संस्था अनएयर मिडियाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
पिता ज्ञानेश्वर पोखरेल र माता सीतादेवी पोखरेलका एक छोरा एकछोरी मध्ये जेठा सन्तान भागीरथ २०३९ साल श्रावण १७ गते पाल्पा जिल्लाको सोमादी ८ ताङ्गसीलमा जन्मनुभएको हो । शिक्षामा एम.ए उतीर्ण गर्नुभएका उहाँ विगत १५ वर्ष यतादेखि यस पेशामा क्रियाशील हुनुुहुन्छ । हालसम्म २५ हजार भन्दा बढि मानिसहरुलाई बोल्ने कला सिकाएर व्यक्तित्व विकास गराउन योगदान पु¥याउनुभएका उनै पोखरेलसँग गरिएको संवाद यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाँइले संचालन गर्नुभएको अनएयर मिडियाको उदेश्य के हो ?
अन्य विकसिल राष्ट्रहरुले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विश्वलाइ साँघुरो बनाइ विकासको गतिलाई तिब्रता दिएको धेरै उदाहरणहरु पढियो देखियो तर हाम्रो भूगोलका हिसाबले अति विकट राष्ट्रलाई संचार र प्रवृधिको माध्यमबाट छिटो सुगम बनाउन सकिन्छ र यहाँका मानिसहरुलाई बोलिको माध्यमबाट संस्कारी बनाउन सकिन्छ जसले समाजमा ज्ञान बढाउँछ , अनुशासन बढाउँछ अनुसरण बढाउँछ, शान्ति बढाउँछ, प्रेम बढाउँछ र स्वर्ग जस्तै बनाउँछ यसको नेतृत्व मैले गर्नुपर्छ भन्ने सोचेँ यसको लागि टिम पनि निर्माण गर्नुपर्छ जस्को लागि एउटा संस्था चाहिन्छ संस्थाको माध्यमबाट काम गर्न सजिलो र सहज हुन्छ भन्ने उदेश्यका साथ अन एयर मिडिया संचालन गरियो यही कामलाई २०६३ सालदेखि नै निरन्तरता दिदैछु ।
यही पेशा अंगाल्नुका पछाडी केही कारण छ कि ?
समयको माग पनि हो, मेरो इच्छा पनि हो र जनताको चाहना पनि । यो सबै चिज मिलेर होला २०६३ सालयता हेर्नुस, देशमा धेरै ठूला परिवर्तनहरु भए जसमा मिडियाको निकै ठूलो योगदान रहेको छ । अहिले देशका ७७ जिल्लामै एफ.एम रेडियोहरु संचालनमा छन्, एफ. एम रेडियोको संख्या पनि झण्डै ६ सयको हाराहारीमा पुगेका छन् । त्यस्तै टेलिभिजन १ सयको हाराहारीमा, पत्रपत्रिका, अनलाइनहरु त हजारौँको संख्यामा पुगिसकेका छन् । यसको लागि प्रत्येक ठाउँमा तालिम संचालन गरेको छु करिब मिडियामा काम गर्ने संघ संस्था चलाउने, व्यापार व्यवसाय गर्ने, शिक्षक, विद्यार्थी, राजनीतिककर्मी, गृहणी आदिलाई बोल्ने कला सिकाएको छु अहिलेसम्म देशका ७७ जिल्लामा तालिम दिएको छु । करिब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी २५ हजारको सख्यामा तालिम दिइसकेको छु, अहिले मानिसहरुलाई बोल्नेकला सिक्नुपर्छ, सिकेपछि जानिन्छ यस्तो कला सिकाउने ठाउँ बागबजारको पिके कलेज अगाडी छ भन्ने सन्देश देशभर पु¥याउन सकेको छु, धेरैलाई बोल्ने संस्कार पनि सिकाएको छु । तसर्थ देशको विकासका लागि केही योगदान पु¥याएको जस्तो लाग्छ यद्यपी गर्न अरु बाँकी छ मीठो बोल्नुपर्छ संस्कारी बन्नुपर्छ भन्ने अभियान ३ करोड नेपालीसम्म पु¥याउन चाहन्छु यो अभियान जारी छ ।
बोल्ने कला कस्ता –कस्ता मान्छेहरुलाई सिकाउनु हुन्छ ?
८ वर्षदेखि माथिको सबै क्षेत्र व्यवसाय उमेरको मानिसहरुलाई सिकाउने गरेको छु । उहाँहरुको समस्या अनुसार बोल्न सिकाइन्छ । कला हरेक मानिसलाई जरुरी पनि पर्छ ।
यस क्षेत्रमा लाग्नु भएको कति समय भयो ?
अनौपचारिक रुपमा धेरै नै भएता पनि औपचारिक तथा व्यवसायिक यात्रामा लागेको भने १५ वर्ष पुरा भयो ।
हालसम्म कति जनाले यहाँबाट प्रशिक्षण लिइसकेका छन् ?
हालसम्म सम्भवत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा गरी करिब २५ हजार बढिलाई तालिम प्रदान गरिसकेको छु ।
यस पेशामा नाम र दाम दुबै छ कि यी दुइमध्ये एक ?
संसारमा मानिसहरु पैसा कमाउनका लागि विभिन्न व्यवसाय पेसा गर्छन, पैसा पनि कमाउँछन् अन्त्यमा मर्नुपर्छ भन्ने स्वीकार्छन् । केही मानिसहरु समाजसेवामा लागेर पैसा खर्च गर्छन आखिरी त्यसो गर्नुका पछाडी रहस्य चाँही नाम कमाउनु नै हुँदो रहेछ । मैले पनि यो कुरालाई विभिन्न अग्रजहरुको मुखबाट पढ्ने क्रममा सुन्ने मौका मिल्यो पुस्तकहरु पढियो अनि मेरो मनमा यससम्बन्धी धेरै तर्क वितर्क भयो र एउटा ठूलो प्रश्न बन्यो । त्यो के भने पैसा पनि कमाउने समाजसेवा पनि हुने । खुसी पनि भइने त्यस्तो के पेसा होला ? भनेर खोज्दै जाँदा रुची पनि मिल्दो पैसा पनि मिल्ने र सामाजिक पनि बन्न पाइने सबै भन्दा उत्तम पेसा लागेर यस पेसामा लागेको छु अहिले निकै खुसी छु । यसमा नाम पनि दामपनि छ र रमाइलो पनि छ ।
भनिन्छ मानिस आफ्नो पेसाबाट सन्तुष्ट हुँदैन तर पनि त्यही पेसा अंगालीरहेको हुन्छ के यो सत्य हो ?
कति धेरै मानिसहरु बाध्यताले पेसा गर्छन् रुची अर्कै हुन्छ तसर्थ उ सन्तुष्ट हुदैँन यो कुरा सत्य हो तर मलाई के लाग्छ भने सानैदेखि नै अविभावक आफ्नो बच्चाको रुची अनुसारको पढाई पढ्ने वातावरण बनाउन सके हरेक मान्छे आफ्नो व्यवसायमा सन्तुष्ट हुने थिए खुसी पनि हुने थिए ।
तपाँइ अहिले कुन–कुन संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ ?
म अहिले अनएयर मिडियाको अध्यक्ष wcco नेपालको प्रतिनिधि, रोज टेक्निकल इन्सिच्युटको अध्यक्ष, ए वान मिडियाको अध्यक्ष लगायत विभिन्न रेडियो, टेलीभिजन, अनलाइ पत्रपत्रिकामा समेत आबद्ध छु विशेषगरी म प्रशिक्षकको भूमिकाम हुने गर्दछु ।
यस्तो कार्य गर्दा सम्मान पनि पाउनुभएको छ कि ?
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सम्मानपत्रहरु धेरै संस्थाबाट प्राप्त गरेको छु काम गर्दै जाँदा यस्तो सफलता मिल्दो रहेछ हरेक पेशामा इमान्दारी र निरन्तर लाग्दा सम्मान त अवस्य मिल्दो रहेछ ।
अन्त्यमा हामीले सोध्न भूलेका र तपाँइले भन्नैपर्ने कुरा केही छन् कि ?
यो संसारमा मानिसले मिठो बोल्न जरुरी छ यो संसार मीठो बोल्नेहरुकै मूठ्ठीमा छ । विग्रेका सम्बन्ध मीठो बोलीले सुध्रार्छ । बनेका सम्बन्ध नमीठो बोलीका प्रभावले विग्रिन्छ । यो त तपाँइ हामीले हाम्रै समाजमा देखेकै हो यतीमात्र होइन टुक्रेका राष्ट्र जोडिने र जोडीएका राष्ट्र टुक्रिने पनी वार्ताकै माध्यमबाट हो । हाम्रै नेपालमा गृहयुद्ध पनी शान्ति वार्ताकै माध्यमबाट समाधान भएको उदाहरण छ । तसर्थ हरेक मानिसले मीठो बोल्नुपर्छ । मीठो बोल्ने पनी सुत्र हुन्छ । यस्तो कला तालीमबाट सिकिन्छ । यस्को लागि तालीम लिनु अनिवार्य छ । त्यसको लागि हामी तयार छौँ भन्न चाहन्छु ।